Global Voices teny Malagasy » Makedonia: Mikatona Ny Famoahana Mangarahara An-Tserasera ny Fahalotoan’ny Rivotra Ao Skopje · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 10 Febroary 2012 15:43 GMT 1	 · Mpanoratra Filip Stojanovski Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Eoropa Afovoany & Atsinanana, Makedonia, Fitantanam-pitondrana, Hafanàm-po nomerika, Lalàna, Mediam-bahoaka, Teknolojia, Tontolo_iainana
Nampisy sahoan-dresaka, tamin'ny herintaona, ny nametrahana ilay rafi-pandrefesana ny fahalotoan-drivotra, naorina tao afovoan-tanànan'i Skopje, ka nahitana ny fa avo ny loton'ny rivotra voarefy hita teo .
Ny mpandinika sasany dia mahatsikaritra ny fisiam-bovoka PM10 miteraka homamiadana ao amin'ny fanorenan-trano miroborobo tohanan'ny fanjakana ao afovoan'ny monisipalite, izay nivadika ho toera-panorenana goavana amin'ny alalan'ilay tetikasa Skopje 2014 . Ny toerana manodidina ihany koa dia ketrehin'ny antsoina hoe “mafia an-tanàna” fatratra izay mampiasa ny fahafantarany olona ao amin'ny governemanta hanova lalàna an-tanàndehibe hamadika ny zaridaina, ny kianja, ny tobim-piara ary ny trano bitika ho trano goavana natao ahazoam-bola, birao ary tranombarotra isan-karazany.
Nitsahatra tsy nandeha intsony hatramin'ny fanombohan'ny volana Janoary 2012 (1 , 2 ; mk) ny rafitra an-tserasera “Fisefoana Skopje”  [mk], fananan'ny Tanànan'i Skopje, rehefa nitatitra ny filazam-baovao maro (1 , 2 , 3 , 4 ; mk) fa mbola ratsy hatrany ny rivotra. Ahitana izao takelaka izao ny vohikala: “Noankotrihina ny Rindrambaiko. Ho avy tsy ho ela indray ny Fampiharana.”
Nandefa  [mk] izao manaraka izao ny bolongana GreenBox:
Tianao ho fantatra ve ny kalitaon'ny rivotra ao afovoan-tanànan'i Skopje? Tsy maintsy mitafy ny kiraro fanao amin'ny ranomandry, parka, satroka, fehintenda ary fonontanana ianao dia mitsidaikadaika mandrapahatonga eny amin'ny Lalana Makedonia dia mijery ny fampafantarana hita eo akaikin'ny tsangambato Šmizla [mitovitovy amin'ny Valley Girl  na Barbie]. Mbola tsy mandeha moa ny vohikala “Fisefoana Skopje” izay mamoaka mivantana ny tarehimarika hatramin'ny Krismasy [fanisana taloha = 7 Jan], ary heverina fa tsy handeha rahatrizay.
Amin'ny alalan'ny “Fisefoana Skopje” no ahafantaran'ny olona ny fahalotoan'ny rivotra ao an-drenivohitra izay avy folo heny noho izay fetra farany ambony eken'ny lalàna. Lasa miafara amin'ny tsy tokony ivoahana ny trano fotsiny izao izany. Taorian'ny faneren'ny olona ny fiadidiana ny tanàna sy ny minisiteran'ny tontolo iainana handefa mpisafo ny manodidina ny orinasa dia nidina vonjimaika ny taham-pahalotoana. Araka ny fikarohana  [mk] nataon'ny Ivotoeram-Pahasalamam-Bahoaka dia afaka manaisotra fahafatesan'olona 117 sy trangan'aretina ratsy dia ratsy 420 isan-taona i Skopje raha mihena ampahatelon'ny misy amin'izao fotoana izao ny fiandronam-bovoka.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2012/02/10/28715/
 fa avo ny loton'ny rivotra voarefy hita teo: https://globalvoicesonline.org/2011/12/06/macedonia-is-skopje-really-the-most-polluted-city-in-the-world/
 tetikasa Skopje 2014: https://globalvoicesonline.org/2010/02/06/macedonia-online-rebellion-against-skopje-2014-plan/
 rafitra an-tserasera “Fisefoana Skopje”: http://www.skopjecentar.ekoinformatika.mk/
 Valley Girl: http://en.wikipedia.org/wiki/Valley_girl